Le nkampani iye wakha imishini izitshalo ejwayelekile nge imishini eziphambili. Sine-QA ephelele futhi QC uhlelo kanye HPLC siqu, GC UV spectrophotometer ukuhlaziya kanye ukulawula izinga lemikhiqizo.
Imikhiqizo yethu eziyinhloko zihlanganisa cortical Oral steroid uketshezi, Anti-estrogen steroid, SARMs steroid, ubulili i-hormone iduna nensikazi, peptides kanye powder steroid ezifana Trenbolone acetate, Boldenone Undecylenate, Drostanolone Propionate, Nandrolone Decanoate, Methenolone Enanthate, testosterone Enanthate, testosterone Cypionate, Tetracaine, Linocaine, Benzocaine, MT-1 nokunye.
Ngokwenza ucwaningo kanye nolwazi Anabolic izimpushana steroid wethu, siyakubonga yokukhiqiza kanye lokuveza ephephile, letisebenta kahle futhi ephezulu steroid ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezweni ezikhulayo. Sisethe ukubambisana okuqinile kanye eziningi ehola zamakhemikhali ezithaka imithi izinkampani e China. Ibhizinisi lethu usabalala emikhakheni eminingi kuhlanganise ejimini ensimini, umtholampilo, isikhungo, izimboni ezenza imithi nokunye. Sithemba ukusungula eside ubuhlobo ibhizinisi namakhasimende emhlabeni wonke.
Ikheli: 18F, Guanghao isakhiwo, Meilong Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Person Imininingwane: Nkk Cathy